🥇 ▷ Simpsons-ka: Springfield waa la cusbooneysiiyay haddana hada waa maalintii la garaacayay ✅
Simpsons-ka: Springfield waa la cusbooneysiiyay haddana hada waa maalintii la garaacayay
Simpsons, oo ah ciyaarta taxanaha ugu xiisaha badan ee showyada TV-ga, ayaa la cusbooneysiiyay oo uu soo gaadhay nooca 4.2.0 si uu noogu keeno maalinta caanka ah ee garaaca, maalintaas oo muwaadin kasta oo ka tirsan Springfield u heellan yahay inuu garaaco abeesada. Waxa kale oo jira war dheeraad ah oo ku saabsan dhismayaasha, jilayaasha, qurxinta, iwm Ha seegin !!!
Kuwa aan aqoon ciyaarta, kani waa waxa ciyaartu ku saabsan tahay: Homer wuxuu sababay qarax si lama filaan ah wuxuuna gubay Springfield. Doh! Hadda waa waqtigiinnii inaad dib u dhisaan! Laga soo bilaabo gacanta qorayaasha qoraalka ‘The Simpsons’, kuwa horumariya waxay ku siinayaan ciyaar dhisme kuu ogolaaneysa inaad abuurto garoon aad leedahay “Springfield”
Maxaa ku cusub nooca 4.2.0
Springfield waxaa qarka u saaran inay ku duulaan abeesooyin badan oo adna waad badbaadin kartaa. Usha qor oo diyaar u ahaw inaad ugaarsato masaska, sababtoo ah waa inaad u dabaaldegto maalinta garaacista.
Waxaad lahaan doontaa jilayaal, hawlgallo iyo waxyaabo intaa ka badan waqti xaddidan!
Dhacdooyin cusub: Ku garaac masaska ku duulay magaaladaada oo ku guuleysta illaa toban abaalmarin, oo leh waxyaabo gaar u ah, oo keliya wakhti kooban.
Dhismooyin cusub: Booqso taarikhda xasaasiga ah ee Sensitive Fort, ku tababara Lugash Gymnasium, ciyaar ciyaar garoonkeeda Duff Stadium oo daawato dagaalka loogu magac daray ‘Springfield Coliseum’.
Jilayaal cusub: Diyaar u noqo dabaaldega maalinta la garaacayo Homer ninja, ku nool sidii moodal oo kale Miss Springfield, ka dhig Drederick Tatum giraankii, bilaw tababbarka jimicsiga Lisa ama ka caawi Willie nadiifinta dharka iyada oo leh maqnaanshihiisa.
Qurxinta cusub: U dabbaaldeg xilli ku habboon qurxinta-qurxinta-qurxinta leh; laga bilaabo funaanadaha iyo ulaha ilaa masaska si ay ugu dhaqmaan midabo badan. Hadana haddii aysan magaaladaadu ku jirin abeesooyin ku filan, hel dhagaxyo gaar ah, saldhigyo geedo leh iyo dogob si aad u kordhiso tirada xammaaratada.
Ergooyin cusub: Magaalada ma ka badbaadi doontaa halista halista ah? Lisa ma badbaadin kartaa masaska?
Simpson-ka Waxay ku taal App Store waxayna la jaanqaadi kartaa iPhone, iPod touch iyo iPad. Wuxuu ubaahanyahay macruufka 4.3 ama wixii ka dambeeya. Barnaamijkan waxaa loo habeeyay iPhone 5. Waxaa lagu heli karaa luqadaha soo socda: Isbaanish, Shiine, Ingiriis, Faransiis, Jarmal, Talyaani, Kuuriyaan.